Karnalikhabar » अनमोल केसीसँग रोमान्स गर्ने अदिती कति हट ? (हेर्नुस् तस्बीर) अनमोल केसीसँग रोमान्स गर्ने अदिती कति हट ? (हेर्नुस् तस्बीर) – Karnalikhabar
अनमोल केसीसँग रोमान्स गर्ने अदिती कति हट ? (हेर्नुस् तस्बीर)
प्रकाशित मिति :2017-04-26 18:05:06
चलचित्र “कृ”मा नायक अनमोल केसीसँग रोमान्स गर्ने भएपछि मोडल अदिती वुढाथोकी अहिले सर्वाधिक चर्चामा छिन् ।मोडलिङ दुनियाँमा चर्चित बनेकी अदितीका तस्बिरहरु गुगल र सामाजिक संजालमा सर्वाधिक खोजिएका पनि छन् । अदितीले पनि सामाजिक संजालमार्फत आफूले नयाँ करिअर सुरु गर्न लागेको लेखेकी छिन् । बोल्ड एन्ड ब्यूटी अदिती नेपाली चलचित्रमा लामो रेसको घोडा बन्न सक्ने अड्कलबाजी पनि सुरु नभएका होइनन् ।
चर्चित ब्यानरका साथमा अहिलेका सुपरस्टार नायक अनमोल केसीसँग काम गर्न लागेकी अदिती बुढाथोकी चर्चित मोडल हुन् । उनको सामाजिक संजाल इन्स्ट्राग्राममा १ लाख भन्दा बढी फलोअर्स छन् । अदितीले हालै मात्र भारतको चर्चित म्यूजिक कम्पनी सोनी म्यूजिकबाट बनेका ३ वटा म्यूजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छिन् ।
अदिती भारतका चर्चित डिजाइनरका डिजाइनमा बनेका पहिरनमा विज्ञापन र प्रिन्ट एडमा पनि काम गर्न लागेको अदितीको भनाई छ । ‘कृ’को अडिसन दिएर उनी मुम्बइ पुगेकी थिन । अहिले पनि मुम्बइ नै रहेको जानकारी आएको छ । उनले अभिनय गर्नु लागेको चलचित्रको छायांकन सुरु भएको छ तर उनी मुम्बइमा छिन् । सामाजिक संजालमा समेत राम्रो फ्यान कमाएकी यी सुन्दरीले विशेषगरि, चर्चित ब्रान्डका विज्ञापनमा मोडलिङ गरेकी छिन् । हाल, उनी बलिउड चलचित्रका लागि पनि तयारीमा छिन् । झापा, दमककी अदिती हाल सिनामंगल बस्छिन् ।उनै अदिती वुढाथोकी केहि बोल्ड र हट तस्बीरहरु हेर्नुस:-source:osnepal